Tag: influencers tiktok
Ahoana ny fampiasana TikTok ho an'ny marketing B2B
Alarobia, Aprily 6, 2022 Alarobia, Aprily 6, 2022 Kyle Dulay
TikTok no sehatra media sosialy mitombo haingana indrindra eran'izao tontolo izao, ary mety hahatratra 50% amin'ny olon-dehibe amerikana izany. Betsaka ny orinasa B2C izay manao asa tsara amin'ny fampiasana TikTok hananganana ny vondrom-piarahamoniny sy handroaka varotra bebe kokoa, alaivo ohatra ny pejin'ny TikTok an'i Duolingo, fa maninona no tsy mahita marketing bebe kokoa momba ny raharaham-barotra (B2B) isika. TikTok? Amin'ny maha-marika B2B azy dia mora ny manamarina izany
Nandritra izay taona vitsy lasa izay, tena nanamboatra ny laharam-pahamehan'ny marketing sy influencer aho. Mahay mifantina tsara aho amin'ny fiaraha-miasa amin'ny marika - miantoka ny lazany namboariko tsy ho voaloto raha mametraka ny fanantenana amin'ny marika momba ny fomba ahafahako manampy. Manan-kery fotsiny ny influencer satria misy mpihaino izay matoky, mihaino ary miasa amin'ny vaovao na tolo-kevitr'izy ireo. Manomboha mivarotra banga dia ho resy ianao